Oops ! is it onion ??
အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ မိသားစုကိုလည်း တည်ဆောက်နိုင်သူ ဦးတင်ထွန်းအောင်ဟာလည်း ကိုယ်တစ်ဦးတည်းအတွက်ထက် အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက်တတ်သူပီပီ ခေါင်းဆောင်သူရဦးရွှေမန်းနဲ့အတူ နိုင်ငံကောင်းကျိုးဆောင်ဖို့ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီထူထောင်ရာမှာ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ဦးဆောင်တာဝန်ယူနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ #UBP #ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ #CHANGEforBETTERMENT…
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၈ ရက်၊ ၀၉၃၀ နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ ပါတီဌာနချုပ်တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပသော ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီ၏စတုတ္တအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ဆုံးဖြတ်ချက်များ